Asisat Oshoala - BBC Somali
Waa inan xiiso leh, dabeecad kulul oo kaliyana jirta 20 sano, Asisat Oshoala, waa cayaaryahannada kaliya ee Afrikaan ah ee tartanka horyaalka sare ee haweenka (Women’s Super League).
Asista oo sanadkii 2014-kii ku guuleysatay cayaaryahannada haweenka ee Afrika iyo cayaaryahannada da’da yar, ayaa sanadkan kooxda haweenka ee Liverpool -oo haysata koobka horyaalka sare ee haweenka – kaga soo biirtay kooxda haweenka Nigeria ka dhisan ee Rivers Angels.
Waxaa lagu naaneysaa “Seedorf” oo ah magaca nin cayaaryahan ahaa, waxaana ay noqotay cayaaryahannada ugu wanaagsan tartankii Koobka Aduunka ee gabdhaha da’doodu ka yartahay 20 jirka ee dhacay sanadkii lasoo dhaafay. Sanadkan waxa ay Nigeria ka caawisay ka qeyb galka cayaaraha Canada 2015-ka, waxaana ay taasi ku muteysatay in uu madaxweynaha Nigeria, Goodluck Jonathan, gudoonsiiyo abaalmarinta dalkiisa laga bixiyo ee loo yaqaano Member of the Order of the Niger.
Waxay tiri: “Waxan dareemaa in la i qiimeeyo. Sanadkii hore saa’id ayaan u shaqeeyay balse waan la yaabay in la igu daro dadkan la soo xulay.Abaalmarinta waa mid u wanaagsan dumarka kubadda cagta – waxay dhabtii nagu caawin kartaa in dalalka oo dhan ay dumarkooda kordhiyaan taageerada ay siiyaan, oo ay ula dhaqmaan si la mid ah sida ay ragga kubadda kubadda cagta ula dhaqmaan.”